Ukuchithwa kwe-aluminium Iya isanda ngokwanda kumzi mveliso. Umzekelo oqhelekileyo kukubamba imibhobho eyahlukeneyo kumzimba otshintsha umzimba. Inkqubo ye- i-coil coil Isetyenziswa ngokubanzi kolu hlobo lwenkqubo ayijikelezi enye, enokubizwa ngokuba yi "Horseshoe-hairpin". Kwezi coil, intsimi yemagnethi kunye nesiphumo sokusasazwa okwangoku kwe-3-D ngokwendalo. Kwezi zicelo, kukho iingxaki kumgangatho odibeneyo kunye nokuhambelana kweziphumo ukusuka kwinxalenye ukuya kwinxalenye. Ukusombulula ingxaki inje kumenzi omkhulu weemoto, inkqubo yokulinganisa ikhompyuter yeFlux3D yayisetyenziselwa inkqubo yokufunda kunye nokwenza ngcono. Ukulungiswa kubandakanya ukutshintsha i-coil yoqheliso kunye noqwalaselo lolawulo lwe-magnetic flux. Iikhoyili ezintsha zoqheliso, eziqinisekiswe ngokwaselebhu, zivelisa izinto ezinamalungu akumgangatho ophezulu kwiindawo ezininzi zemveliso.
Imoto nganye ifuna izinto ezahlukeneyo zokufudumeza ubushushu (iiheater cores, evaporators, condensers, radiators, njl.njl.) Ukupholisa amandla, umoya opholileyo, ukupholisa ioyile, njl.njl. Uninzi lwezithuthi zokuhambisa ubushushu babakhweli namhlanje zenziwe ngealuminium okanye aluminiyamu. Nokuba injini enye isetyenziselwa iimodeli ezininzi zeemoto, uqhagamshelo lungahluka ngenxa yolwakhiwo olwahlukileyo phantsi kwehood. Ngesi sizathu, kuyinto eqhelekileyo ukuba abavelisi bamalungu benze imizimba emininzi yokutshintsha ubushushu kwaye emva koko banamathisele izihlanganisi kwindawo yesibini.
Imizimba yokufudumeza umzimba ihlala ineefini zealuminium, iityhubhu kunye neentloko ezixutywe kunye eziko. Emva kokubhrasha, isitshisi sokufudumeza senzelwe imodeli enikezelweyo yemoto ngokuncamathelisa iitanki zenayiloni okanye imibhobho eyahlukeneyo yealuminiyam eneebhloko zonxibelelwano. Le mibhobho iqhotyoshelwe nokuba yi-MIG welding, ilangatye okanye i-brazing induction. Kwimeko yokubhrasha, ulawulo lobushushu oluchanekileyo luyafuneka ngenxa yomahluko omncinci kubushushu obunyibilikayo kunye nobhedu bealuminium (20-50 C ngokuxhomekeke kwi-alloy, ukuzalisa isinyithi kunye nomoya), ukuqhuba okuphezulu kwe-aluminium kunye nomgama omfutshane ukuya kwezinye amalungu adibeneyo ekusebenzeni kwangaphambili.
Ukutshisa ukutshisa yindlela eqhelekileyo yokubamba iipayipi ezahlukeneyo ukufudumeza iintloko. Umzobo 1 ngumfanekiso we ukukhangela ibhondi ukuseta ukubhobhoza ipayipi kumbhobho kwintloko yokubonisa ubushushu. Ngenxa yeemfuno zokufudumeza ngokuchanekileyo, ubuso bekhoyili yoqheliso kufuneka busondele kumdibaniso oza kubrazwa. Ke ngoko i-coil ye-cylindrical elula ayinakusetyenziswa, kuba icandelo alinakususwa emva kokuba idibeneyo ibrashi.
Zimbini iindlela eziphambili zokufaka iikhoyili ezisetyenziselwa ukuhombisa la malungu: “i-clamshell” kunye ne-“horseshoe-hairpin”. Inductors "I-Clamshell" ifana ne-cylindrical inductors, kodwa zivulekile ukuvumela ukususwa kwenxalenye. Abaqhubi be "Horseshoe-hairpin" babunjwe njengehashe ukuze balayishe le nxalenye kwaye zimbini ii-coilpin coil kumacala ahlukeneyo edibeneyo.
Uncedo lokusebenzisa i "Clamshell" inductor kukuba ukufudumeza kufana ngokujikeleza kwaye kulula ukuqikelela. Ukungancedi kwe-"Clamshell" inductor kukuba inkqubo yoomatshini efunekayo inzima ngakumbi kwaye abafowunelwa abaphezulu ngoku abanakuthenjwa.
I-"Horseshoe-hairpin" inductors ivelisa ubunzima obushushu be-3-D kune "Clamshells". Uncedo lwesitayile se "Horseshoe-hairpin" kukuba indibano yokuphatha yenziwe lula.
Ukulinganisa kweKhompyuter kulungiselela ukubamba
Umvelisi omkhulu othengisa ubushushu wayenengxaki zomgangatho wokubhinca indibaniselwano eboniswe kwiFig. 1 usebenzisa i-inductor yehashe-hairpin. Umdibaniso webrashi wawulungile kuninzi lwamalungu, kodwa ukufudumeza kuya kwahluka ngokupheleleyo kwezinye iindawo, kukhokelela kubunzulu obudibeneyo bokudibanisa, amalungu adibeneyo kunye nentsimbi yokugcwalisa eqhuba udonga lombhobho ngenxa yobushushu bendawo. Nokuba kuvavanywa indawo nganye yokufudumeza ubushushu ukuvuza, ezinye iindawo zisavuza kule ndawo yokudibana. Iziko le-Induction Technology Inc.yenziwe ikhontrakthi yokuhlalutya nokusombulula ingxaki.
Unikezelo lwamandla olusetyenziselwa umsebenzi lunokuphindaphindeka rhoqo kwe-10 ukuya kuma-25 kHz kunye namandla alinganisiweyo angama-60 kW. Kwinkqubo yokukhangela, umqhubi ufaka isangqa sesinyithi sokugcwalisa kumbhobho wokufaka umbhobho ngaphakathi kwetyhubhu. Isitshisi sokufudumeza sibekwe kwi-rig ekhethekileyo kwaye sihanjiswe ngaphakathi kwe-inductor yehashe.
Indawo yonke yokubhrawuza yenziwe kwangaphambili. Ubuninzi obusetyenziselwa ukufudumeza icandelo ngokwesiqhelo li-12 ukuya kwi-15 kHz, kwaye ixesha lokufudumeza lijikeleze imizuzwana engama-20. Inqanaba lamandla licwangcisiwe ngonciphiso lomgama ekupheleni komjikelo wobushushu. I-pyrometer ebonakalayo icima amandla xa iqondo lobushushu kwicala elingasemva lendibaniselwano lifikelela kwixabiso elicwangcisiweyo ngaphambili.
Zininzi izinto ezinokubangela ukungahambelani komvelisi, njengokuhluka kwamalungu ngokudibeneyo (ubungakanani kunye nokuma) kunye nokungazinzi kunye nokuguquguquka (ngexesha) kombane kunye nokunxibelelana kobushushu phakathi kwetyhubhu, umbhobho, iringi yokufaka, njl. azizinzanga ngokwendalo, kwaye umahluko omncinci wale miba unokubangela inkqubo yenkqubo eyahlukeneyo. Umzekelo, iringi yensimbi evulekileyo evaliweyo ingaphumla phantsi kwamandla ombane, kwaye isiphelo simahla sesangqa sinokuphinda sifunxwe yimikhosi ye-capillary okanye sihlale singanyibiliki. Izinto zengxolo kunzima ukunciphisa okanye ukuphelisa, kwaye isisombululo kwingxaki sifuna ukomelela kwenkqubo iyonke. Ukulinganisa kweKhompyuter sisixhobo esisebenzayo sokuhlalutya nokwandisa inkqubo.
Ngexesha lokuvavanywa kwenkqubo yobhedu, imikhosi eyomeleleyo ye-electrodynamic yaqwalaselwa. Okwangoku umbane uvuliwe, i-coil yehashe ngokucacileyo ifumana ulwandiso ngenxa yokusetyenziswa ngesiquphe kwamandla ombane. Ke, i-inductor yenziwa yomelela ngokomatshini, kubandakanya ukubandakanya ipleyiti eyongezelelweyo ye-fiberglass (G10) edibanisa iingcambu zekhoyili ezimbini zeenwele. Omnye umboniso wamandla ombane we-electrodynamic yayikukutshintsha kwesinyibilikisi esisinyibilikisi kude neendawo ezikufutshane nokujika kobhedu apho amandla omazibuthe omelele. Kwinkqubo yesiqhelo, isinyithi sokugcwalisa sisasaza ngokufanayo ukujikeleza ngokudibeneyo ngenxa yamandla e-capillary kunye nomxhuzulane ngokuchaseneyo nenkqubo engaqhelekanga apho isinyithi sokugcwalisa sinokuphuma ngaphandle kwendibaniselwano okanye sinyukele ecaleni kombhobho.
kuba Ukutyalwa kwealuminium yinkqubo enzima kakhulu, ayinakulindeleka ukulinganisa ngokuchanekileyo kwayo yonke ikhonkco yeziganeko ezidityanisiweyo (i-electromagnetic, i-thermal, i-mechanical, i-hydrodynamic kunye ne-metallurgical). Inkqubo ebaluleke kakhulu nelawulwayo kukuvelisa ubushushu bemithombo yombane, eyahlalutywa kusetyenziswa inkqubo yeFlux 3D. Ngenxa yobume obuntsonkothileyo benkqubo yokubamba induction, indibaniselwano yokulinganisa kweekhompyuter kunye novavanyo lwalusetyenziselwa inkqubo yoyilo kunye nokwenza ngcono.
Induction_Aluminium_Brazing kunye neComputer_Assisted
iindidi Teknoloji tags i-aluminium brazer, i-aluminium brazing, Inkqubo yokukhangela ialuminium, i-aluminium yoqheliso, i-aluminium induction brazing heater, thenga i-aluminium brazer, thenga i-aluminium induction brazer, Isantya esiphezulu sealuminium brazing, Induction Aluminium Brazing, Ukwenziwa kwesicelo sealuminium, I-coil ye-aluminium yokufakelwa, i-aluminium yotywala Post yokukhangela